Aqalka Sarre oo naqdiyey qoraal kasoo baxay gudoonka Golaha Shacabka
Aqalka Sare oo naqdiyey qoraal kasoo baxay gudoonka Golaha Shacabka
Senate-ka Soomaaliya ayaa talaabada Aqalka Hoose wuxuu ku sifeeyay "sharci darro iyo xadgudub".
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddoonka Aqalka Sarre ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamay talaabo afhayeenka Golaha Shacabka uu qaraar ugu bedelay xeerka metelaada gobolka Banaadir.
Senate-ka oo difaacay kaalintiisa meelmarinta xeerarka waddanka ayaa "xadgudub" ku sifeeyay qoraalka guddoonka Aqalka Hoose oo loo diray wasaaradda dastuurka federaalka iyo guddiga dib u eegista dastuurka.
Dhanka kale, guddoonka Aqalka Sarre ayaa waxba kama jiraan qeexay afarta xeer doorasho ee Aqalka Hoose meelmariyey "haddii aan la waafajinin habraaca xeer dejinta dalka" oo ah labada Aqal ay ansixiyaan.
Guddiga madaxa-banaan ee doorashooyinka qaranka ayay ugu baaqeen in aysan isticmaali karin xeerarkaas "inta laga saxaayo".
"Sharciyadda metelaada gobolka Banaadir waxay u baahan tahay in loo dhameystiro habraaca dastuuriga ah, sidda ku xusan qodobka 9aad ee Dastuurka KMG iyo 12aad (6) ee sharciga doorashooyinka Qaranka ee Heer Federaal," ayaa lagu yiri nuqul kamid ah qoraalka Aqalka Sarre.
Dastuurka qabyadda ah ayaa xeerinaya in ay muhiim tahay in la helo maqaamka caasimadda Muqdisho kahor metelaada gobolka Banaadir.
Sidda ay sheegeen siyaasiyiin, guddoonka Golaha Shacabka baarlamaanka federaalka ah ayaa hortaagan mooshin ay saxiixeen tobanaan Xildhibaano ah laguna dalbanayo in laga doodo maqaamka magaalada Muqdisho.
Cabdi Xaashi oo ka hor-yimid xeerar horyaala Golaha Shacabka
Soomaliya 24.06.2020. 13:30
Aqalka Hoose ayaa meelmariyey qaar kamid ah hindise sharciyeedkan oo quseeya doorashooyinka 2020-21.
Wasiiro iyo Xildhibaano qaadacay ansixinta metelaada gobolka Banaadir
Soomaliya 27.06.2020. 19:25
Baarlamaanka oo faragelinaya wadahadaladda doorashadda 2020-21
Soomaliya 07.06.2020. 09:50